दर खाँदा कस्तो र के के कुरामा ध्यान दिने त ? – E-Ramechhap
दर खाँदा कस्तो र के के कुरामा ध्यान दिने त ?
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७७, बिहीबार १५:१२
नेपाली महिलाहरुको महान चाड तिजको दर खाने दिन आज । तपाईहरु धेरै जनाले दर खानका लागी सामाग्रीहरु तयार पारिसक्नुभयो होला । अनि कतिपयले त दर पकाउने र खाने सुरसार गरिसक्नुभयो होला । व्रतको अघिल्लो दिन आज खीर, ढकनी, हलुवा, विभिन्न मिठाई तथा दूध घिउबाट बनेका परिकार दरका रुपमा खाने परम्परा छ । दर खाँदा रङ्गलगायत अखाद्य वस्तु, हालेका फोहोर गरी बनाइएका मिठाई तथा विषादी हालेका तरकारी र फलफुल नखान डाक्टरले सुझाव दिएका छन् । सकेसम्म घरमै बनाइएका ताजा परिकार खाएर तीज मनाउन डाक्टरको सुझाव छ ।
खाना खाँदा आफ्नो अञ्जुलीको एक अञ्जुली खाना खानुपर्छ । ठूलो मुठीले एक मुठी दाल र दुई अञ्जुली तरकारी खानुपर्छ । हाम्रो तौल र हाइटअनुसार खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । हामीले दैनिक खाने आहारमा हरियो सागपात, गेडागुडी, फलफूल, पहेँलो र हरियो खानेकुरा बढी मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । पेट टम्म हुने गरी खाना खानु हुँदैन । धेरै खाँदा बान्ता हुने पखाला लाग्ने, अल्छी लाग्ने, निद्रा लाग्ने, कमजोर महसुस हुने हुन्छ । डिप फ्राइड मासु नखाने, सकेसम्म मासु उसिनेर खाने, अनि मसला धेरै खानु हुँदैन । रातो मासु सकेसम्म नखाएको राम्रो हो । धेरै चिल्लो खानु हुँदैन । चिल्लो, पिरो धेरै हुँदा ग्यास्ट्रिक हुने, प्रेसर बढ्ने, खाना अमन हुने, बान्ता हुने, पचाउन नसक्ने, कमजोर हुने, निद्रा लाग्ने जस्तो हुन्छ । हाम्रो शरीर पनि मेसिनजस्तै हो । त्यसैले खाना हाम्रो शरीरले जति लिन्छ, त्यति मात्र खानुपर्छ ।